Noho ny Covid -19: manantombo avo roa na telo heny ny fifandraisan-davitra | NewsMada
Noho ny Covid -19: manantombo avo roa na telo heny ny fifandraisan-davitra
Par Taratra sur 06/04/2020
Araka ny fanadihadiana nataon’ny mpikaroka sy andiana mpianatra vitsivitsy ao amin’ny ISCPA (Institut supérieur des médias de Paris), fantatra fa mahazo vahana indrindra amin’izao valanaretina Coronavirus maneran-tany izao ny sehatry ny fifandraisana sy ny serasera. Mitombo avo roa heny na telo heny ny antso na tambajotra serasera ifandraisan’ny mpiara-monina, mpiara-miasa, orinasa, sampandraharaha isan-karazany, fanja­kana na tsy miankina.
Amin’izay ampahany betsaka mampandeha ny serasera izay ny ifampiraharahan’ny fanjakana amin’ireo mpisehatra amin’ny fifandraisan-davitra maneran-tany. Hita izany eto amintsika avy amin’ny Airtel, ny Telma, ary ny Orange, tolotra sms iombona­na, sarany mitovy. Nambaran’ireo mpikaroka fa tsy « tratran’ny Coronavirus » ireny orinasa mpisehatra amin’ny fifandraisana ireny, afaka mihodina tsara, tafahoatra amin’ny andavanandro ny asan’izy ireny amin’izao fotoana izao, raha tsy izany tsy afaka manampy toy izao.
Any Eoropa, hopitaly maro nametrahana tambanjotra iombonana, afahana mamaly haingana ny filàna sy fanampiana rehetra, toy ny fitaovana, fanafody… Eo koa ny tranokala 3DCOVID.org ho an’ireo mpitsabo, mpikaroka isan-tsokajiny, mpanamboatra fitaovana. Ny any Frantsa, ohatra, averin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ny lany amin’ny fizahana ataon’ny mpitsabo amin’ny vidéo momba ny Covid-19.